23.07.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“मीठे बच्चे– यो तिम्रो जीवन धेरै-धेरै अमूल्य छ किनकि तिमीले श्रीमत अनुसार विश्वको सेवा गर्छौ , यस नर्कलाई स्वर्ग बनाउँछौ।”
खुसी गायब हुने कारण तथा त्यसको निवारण के हो?
खुसी गायब हुन्छ– (१) देह अभिमानमा आउनाले, (२) दिलमा कुनै शङ्का पैदा भएमा खुसी हराउँछ त्यसैले बाबा राय दिनुहुन्छ– जब कुनै शङ्का उत्पन्न भयो भने तत्काल बाबासँग सोध। देही-अभिमानी रहने अभ्यास गर्यौ भने सदैव खुसी रहन्छ।
उच्च भन्दा उच्च भगवान र फेरि भगवानुवाच, बच्चाहरूको सम्मुख। म तिमीलाई उच्च भन्दा उच्च बनाउँछु त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। सम्झन्छौ पनि बाबाले हामीलाई सारा विश्वको मालिक बनाउनु हुन्छ। मनुष्यले भन्छन्– परमपिता परमात्मा उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ– म त विश्वको मालिक बन्दिनँ। भगवानुवाच– मलाई मनुष्यले भन्छन् उच्च भन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ र म भन्छु– मेरा बच्चाहरू उच्च भन्दा उच्च छन्। सिद्ध गरेर बताउँछु। पुरुषार्थ पनि ड्रामा अनुसार गराउनु हुन्छ, कल्प पहिला जस्तै। बाबा सम्झाइरहनु हुन्छ, कुनै पनि कुरा बुझेनौ भने सोध। मनुष्यलाई केही पनि थाहा छैन। दुनियाँ के हो, वैकुण्ठ के हो? जति पनि नवाब, मुगल आदि थिए, अमेरिकामा जति पनि पैसा भएकाहरू छन् तर यी लक्ष्मी-नारायणजस्ता त हुन सक्दैनन्। उनीहरूले त ह्वाइट हाउस आदि बनाउँछन् तर त्यहाँ त रत्न जडित सुनका घरहरू बन्छन्। त्यसलाई भनिन्छ नै सुखधाम। तिम्रो नै हिरो-हिरोइनको पार्ट छ। तिमी डायमण्ड बन्छौ। गोल्डन एज थियो। अहिले छ आइरन एज। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी कति भाग्यशाली छौ। भगवान स्वयंले बसेर सम्झाउनु हुन्छ भने तिमीलाई कति खुसी हुनु पर्छ। तिम्रो यो पढाइ हो नै नयाँ दुनियाँको लागि। यो तिम्रो जीवन धेरै अमूल्य छ किनकि तिमीले विश्वको सेवा गर्छौ। बाबालाई बोलाउँछन् नै आएर नर्कलाई स्वर्ग बनाउनुहोस् भनेर। हेवनली गड फादर भन्छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी स्वर्गमा थियौ नि, अहिले नर्कमा छौ। फेरि स्वर्गमा हुन्छौ। नर्क सुरु हुन्छ, त्यतिबेला स्वर्गको कुरा भुलिन्छ। यो त फेरि पनि हुन्छ। फेरि पनि तिमीलाई गोल्डन एजबाट आइरन एजमा अवश्य आउनु छ। बाबा बारम्बार बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ– दिलमा कुनै पनि शङ्का छ, जसबाट खुसी रहँदैन भने बताऊ। बाबा बसेर पढाउनु हुन्छ त्यसैले पढ्नु पनि पर्यो नि। खुसी रहँदैन किनकि तिमी देह-अभिमानमा आइहाल्छौ। खुसी त हुनुपर्छ नि। बाबा त केवल ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ, तिमी त विश्वको पनि मालिक बन्छौ। भन्न त बाबालाई रचयिता भनिन्छ तर यस्तो होइन– प्रलय हुन्छ फेरि नयाँ दुनियाँ रच्नुहुन्छ। होइन, बाबा भन्नुहुन्छ– मैले केवल पुरानोलाई नयाँ बनाउँछु। पुरानो दुनियाँको विनाश गराउँछु। तिमीलाई नयाँ दुनियाँको मालिक बनाउँछु। मैले केही गर्दिनँ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। पतित दुनियाँमा नै मलाई बोलाउँछन्। पारसनाथ बनाउँछु। त्यसैले बच्चाहरू स्वयं पारसपुरीमा आउँछन्। त्यहाँ त मलाई कहिल्यै बोलाउँदैनन्। कहिल्यै बोलाउँछौ– बाबा पारसपुरीमा आएर थोरै भ्रमण त गर्नुहोस्? बोलाउँदै बोलाउँदैनन्। गायन पनि छ– दु:ख में सिमरण सब करें, पतित दुनियाँमा याद गर्छन्, सुख में करे न कोही। न याद गर्छन् न बोलाउँछन्। केवल द्वापरमा मन्दिर बनाएर त्यसमा मलाई राखिदिन्छन्। पत्थरको नभए पनि हीराको लिङ्ग बनाएर राखिदिन्छन्– पूजा गर्नको लागि, कति आश्चर्यको कुरा छ। राम्रोसँग कान खोलेर सुन्नुपर्छ। कान पनि पवित्र बनाउनुपर्छ। पवित्रता फस्ट। भन्छन्– शेरनीको दूध सुनको बर्तनमा नै अडिन सक्छ। यसमा पनि पवित्रता भएमा नै धारणा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय पाउनु छ। तिम्रो यो अन्तिम जन्म हो। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, यो त्यही महाभारत लडाईं पनि हो। कल्प-कल्प जसरी विनाश भएको थियो, हुबहु अहिले पनि हुन्छ, ड्रामा अनुसार।
तिमी बच्चाहरूले स्वर्गमा फेरि आफ्नो महल बनाउनु छ। जसरी कल्प पहिला बनाएका थियौ। स्वर्गलाई भनिन्छ नै प्याराडाइज। पुराणबाट प्याराडाइज अक्षर निस्किएको हो। भन्छन्– मानसरोवरमा परीहरू रहन्थे। त्यसमा कसैले डुबुल्की लगायो भने परी बन्छ। वास्तवमा हो ज्ञान मानसरोवर। त्यसमा तिमी केबाट के बन्छौ। सुन्दरलाई परी भन्छन्, यस्तो होइन पखेंटा भएका कोही परी हुन्छन्। जसरी तिमी पाण्डवहरूलाई महावीर भनिन्छ, उनीहरूले फेरि पाण्डवहरूका धेरै ठूला-ठूला चित्र, गुफा आदि देखाएका छन्। भक्तिमार्गमा कति पैसा बर्बाद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ– मैले त बच्चाहरूलाई कति धनवान बनाएँ। तिमीले यति धेरै पैसा कहाँ लग्यौ? भारतवर्ष कति धनवान थियो। अहिले भारतको के हालत छ। जो १०० प्रतिशत सुखी थियो, अहिले १०० प्रतिशत दु:खी बनेको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कति तयारी गर्नुपर्छ। बच्चा आदिलाई पनि यही सम्झाउनु छ– शिवबाबालाई याद गर। तिमी कृष्णजस्तो बन्छौ। कृष्ण कसरी बने, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। पहिलो जन्ममा शिवबाबालाई याद गर्नाले नै कृष्ण बने। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। तर अपार खुसी उनीहरूलाई नै रहन्छ जो सदा अरूको सेवामा रहन्छन्। मुख्य धारणा– चालचलन धेरै-धेरै रोयल हुनुपर्छ। खानपान धेरै राम्रो हुनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूको पासमा जब कोही आउँछ भने उसको हर प्रकारले सेवा गर्नुपर्छ। स्थूल पनि सूक्ष्म पनि। जिस्मानी-रूहानी दुवै गर्नाले धेरै खुसी हुन्छ। कोही पनि आउँछन् भने सच्चा सत्य-नारायणको कथा सुनाऊ। शास्त्रमा त के-के कथा लेखिदिएका छन्। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्किए फेरि ब्रह्माको हातमा शास्त्र दिए। अब विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा कसरी निस्कन्छन्, कति रहस्य छ। अरू कसैले यी कुरालाई बुझ्न सक्दैन। नाभिबाट निस्कने त कुरै होइन। ब्रह्मा नै विष्णु, विष्णु नै ब्रह्मा बन्छन्। ब्रह्मालाई विष्णु बन्नमा सेकेण्ड लाग्छ। सेकेण्डमा जीवनमुक्ति भनिन्छ। बाबाले साक्षात्कार गराउनु भयो– तिमी विष्णुको रूप बन्छौ। सेकेण्डमा निश्चय भयो। विनाशको साक्षात्कार पनि भयो, नत्र त कलकत्तामा राजाई ठाँटसँग रहन्थे। कुनै मेहनत थिएन। धेरै रोयल्टीसँग रहन्थे। अहिले बाबाले तिमीलाई यी ज्ञान रत्नहरूको व्यापार सिकाउनु हुन्छ। त्यो व्यापार त यसको अगाडि केही होइन। तर यिनको पार्ट र तिम्रो पार्टमा फरक छ। बाबाले यिनमा प्रवेश गर्नुभयो अनि तुरुन्तै सबै छोडिदिए। भट्ठी बन्नु थियो। तिमीले पनि सबै कुरा छोड्यौ। नदी पार गरेर आए भट्ठीमा परे। के के भयो, कसैको पर्वाह छैन। भन्छन्– कृष्णले भगाए! किन भगाए? उनीहरूलाई पटरानी बनाउन। यो भट्ठी पनि बन्यो, तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गको महारानी बनाउनको लागि। शास्त्रमा त के के लेखिदिएका छन्, यथार्थमा के हो सो अब तिमीले बुझ्छौ। भगाउने कुरै होइन। कल्प पहिला पनि गाली मिलेको थियो। नाम बदनाम भएको थियो। यो त ड्रामा हो, जे हुन्छ कल्प पहिला जस्तै।
अहिले तिमीले राम्रोसँग जानेका छौ– कल्पपहिला जसले राज्य लिएका थिए उनीहरू अवश्य आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ– म पनि कल्प-कल्प आएर भारतवर्षलाई स्वर्ग बनाउँछु। पूरा ८४ जन्मको हिसाब बताउनु भएको छ। सत्ययुगमा तिमी अमर रहन्छौ। त्यहाँ अकालमा मृत्यु हुँदैन। शिवबाबाले कालमाथि विजय प्राप्त गराउनु हुन्छ। भन्नुहुन्छ– म कालहरूको काल हुँ। कथाहरू पनि छन् नि। तिमीले कालमाथि विजय पाउँछौ। तिमी जान्छौ अमरलोकमा। अमरलोकमा उच्च पद पाउनको लागि एक त पवित्र बन्नु छ, अनि फेरि दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। नित्य आफ्नो चार्ट राख। रावणद्वारा तिमीलाई घाटा परेको छ। मद्वारा फाइदा हुन्छ। व्यापारीहरूले यी कुरालाई राम्रोसँग बुझ्छन्। यी हुन् ज्ञान रत्न। कोही विरलै व्यापारीले बाबासँग व्यापार गर्छन्। तिमी व्यापार गर्न आएका छौ। कसैले त राम्रोसँग व्यापार गरेर स्वर्गको वर्सा लिन्छन्– २१ जन्मको लागि। २१ जन्म त के ५०-६० जन्म तिमी धेरै सुखी रहन्छौ। पद्मपति बन्छौ। देवताहरूको पाउमा पद्म (कमल) देखाउँछन् नि। अर्थ कहाँ बुझ्छन् र! तिमी अहिले पद्मपति बनिरहेका छौ भने तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म कति साधारण छु। तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गमा लिएर जान आएको छु। बोलाउँछौ पनि– हे पतित-पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। पावन रहन्छन् नै सुखधाममा। शान्तिधामको कुनै इतिहास भूगोल त हुन सक्दैन। त्यो आत्माहरूको वृक्ष हो। सूक्ष्म वतनको कुनै कुरै भएन। बाँकी यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ त्यो तिमीले जानेका छौ। सत्ययुगमा लक्ष्मी-नारायणको डिनायस्टी थियो। यस्तो होइन, केवल एउटै लक्ष्मी-नारायणले राज्य गर्छन्। वृद्धि त हुन्छ नि। फेरि द्वापरमा उनीहरू नै पूज्यबाट पुजारी बन्छन्। मनुष्यले फेरि परमात्माको लागि भनिदिन्छन्– हजुर नै पूज्य... जसरी परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्छन्, यी कुरालाई तिमीले बुझ्छौ। आधाकल्प तिमीले गायन गर्दै आयौ– उच्च भन्दा उच्च भगवान। अब भगवानुवाच– उच्च भन्दा उच्च बच्चाहरू हौ। यस्तो बाबाको रायमा पनि चल्नुपर्छ नि। गृहस्थ व्यवहार पनि सम्हाल्नु छ। यहाँ त सबै रहन सक्दैनन्। सबै रहने हो भने कति ठूला भवन बनाउनु पर्छ। यो पनि तिमीले एक दिन देख्न सक्छौ– तलदेखि माथिसम्म (शान्तिवनदेखि मधुवनसम्म) कति ठूलो क्यू लाग्नेछ, दर्शन गर्नको लागि। कसैले दर्शन गर्न पाएन भने गाली पनि गर्न थाल्छन्। सम्झन्छन्– महात्माको दर्शन गरौं। अब बाबा त हुनुहुन्छ बच्चाहरूको। बच्चाहरूलाई नै पढाउनु हुन्छ। तिमीले कसैलाई मार्ग बताउँछौ भने कोही त राम्ररी चल्छन्, कसैले धारण गर्न सक्दैनन्, कति छन् जो सुन्दै पनि गर्छन् फेरि बाहिर गएपछि जहाँको तहीँ रहन्छन्, त्यो खुसी रहँदैन, पढाइ हुँदैन, योग हुँदैन। बाबाले कति सम्झाउनु हुन्छ, चार्ट राख। नत्र धेरै पछुताउनु पर्नेछ। मैले बाबालाई कति याद गर्छु? चार्टमा हेर्नुपर्छ। भारतको प्राचीन योगको धेरै महिमा छ। त्यसैले बाबा सम्झाउनु हुन्छ– कुनै पनि कुरा बुझेनौ भने बाबासँग सोध। पहिला तिमीले केही पनि जान्दैनथ्यौ। बाबा भन्नुहुन्छ– यो हो काँडाको जंगल। काम महाशत्रु हो। यो अक्षर उही गीताको हो। गीता पढ्थेँ तर केही बुझ्दिनथेँ। बाबाले सारा उमेर गीता पढे। सम्झन्थे– गीताको माहात्म्य धेरै राम्रो छ। भक्तिमार्गमा गीताको कति मान छ। गीता ठूलो पनि हुन्छ, सानो पनि हुन्छ। कृष्ण आदि देवताहरूका तिनै चित्रहरू पैसा-पैसामा मिल्छन्, अनि तिनै चित्रका फेरि कति ठूला-ठूला मन्दिरहरू पनि बनाउँछन्। त्यसैले बाबा सम्झाउनु हुन्छ– तिमीलाई त विजय मालाको दाना बन्नु छ। यस्ता प्यारा बाबालाई बाबा-बाबा पनि भन्छन्। सम्झन्छन् पनि– स्वर्गको राजाई दिनुहुन्छ फेरि पनि सुनन्ती, कथन्ती, अहो मायाले भगाइदिन्छ। बाबा भनेपछि त बाबा मतलब बाबा। भक्तिमार्गमा पनि गायन छ पतिहरूका पति, गुरुहरूका गुरु एकै हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। ज्ञानका सागर पतित-पावन हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ– बाबा, हामीले कल्प-कल्प हजुरबाट वर्सा लिँदै आएका हौं। कल्प-कल्प मिल्छौं। हजुर बेहदका बाबाबाट हामीलाई अवश्य बेहदको वर्सा मिल्छ। मुख्य हो नै अल्फ। यसमा बे समाहित छ। बाबा मतलब वर्सा। त्यो हो हदको, यो हो बेहदको। हदका बाबा त अनगिन्ती छन्। बेहदका बाबा त एउटै हुनुहुन्छ। अच्छा!
मीठे-मीठे ५ हजार वर्षपछि फेरि आएर मिलेका बच्चाहरूप्रति माता-पिता बापदादाको याद-प्यार एवं गुडमर्निङ्ग। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
१) स्थूल, सूक्ष्म सेवा गरेर अपार खुसीको अनुभव गर्नु र गराउनु छ। चालचलन र खानपिनमा धेरै सभ्यता हुनु पर्छ।
२) अमरलोकमा उच्च पद पाउनको लागि पवित्र बन्नुको साथै दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। आफ्नो खाता हेर्नु छ– मैले बाबालाई कति याद गर्छु? अविनाशी ज्ञान रत्नको कमाई जम्मा गरिरहेको छु? कान पवित्र बनेका छन् जसमा धारणा हुन सकोस्?
मायाको खेललाई साक्षी भएर हेर्ने सदा निर्भय , मायाजित भव
समय प्रति समय जसरी तिमी बच्चाहरूको स्थिति राम्रो हुँदै गइरहेको छ, अब मायाको आक्रमण हुनु हुँदैन। माया नमस्कार गर्न आओस्, आक्रमण गर्न होइन। यदि माया आए पनि त्यसलाई खेल सम्झेर हेर। यस्तो अनुभव होस्, मानौं साक्षी भएर हदको ड्रामा देख्दैछौ। मायाको जस्तोसुकै विकराल रूप भए पनि तिमीले त्यसलाई खेलौना र खेल सम्झेर हेर्यौ भने एकदम आनन्द आउँछ, फेरि त्यससँग डराउने छैनौ वा आत्तिने छैनौ। जो बच्चाहरू सदा खेलाडी बनेर साक्षी भई मायाको खेल हेर्छन्, उनीहरू सदा निर्भय वा मायाजित बन्छन्।
यस्तो स्नेहको सागर बन, जसले गर्दा क्रोध नजिक पनि आउन नसकोस्।